Banyere Anyị - Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.
E hiwere Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd. na 2005, nwere ụlọ ọrụ ọkachamara anọ maka igwe ọgwụ, igwe mkpokọta mkpokọta ọbara, akụrụngwa ọgwụgwọ mmiri na akpa akpa & usoro lọjistik nwere ọgụgụ isi.
Anyị na-enye usoro injinịa agbakwunyere maka ụlọ ọrụ ọgwụ na ụlọ ọrụ ọgwụ zuru ụwa ọnụ na nrube isi na EU GMP / US FDA GMP, WHO GMP, PIC / S GMP ụkpụrụ wdg. imewe atụmatụ ezi uche dị na ya, akụrụngwa dị elu na ọrụ ahaziri iche maka ụlọ ọrụ ọgwụ / ụlọ ọgwụ dị iche iche sitere na mba dị iche iche.
Ngwọta injinịa IVEN maka ụlọ ọrụ ọgwụ na ụlọ ọgwụ gụnyere ụlọ dị ọcha, njikwa akpaaka na sistemụ nleba anya, usoro ọgwụgwọ mmiri ọgwụ, ịkwadebe na ịnyefe sistemụ, ndochi na mbukota, sistemụ lọjistik nwere ọgụgụ isi, sistemụ njikwa mma, ụlọ nyocha etiti na ihe ndị ọzọ. . Na -elekwasị anya n'ihe ndị ahịa chọrọ, IVEN na -ahazi nke ọma usoro injinịa maka ndị ọrụ na:
Anyị na -ebupụ ngwa ọrụ narị ihe karịrị mba iri anọ, nyekwara ihe karịrị ọrụ ọgwụ ọgwụ iri na ọtụtụ ọrụ mgbanwụ ọgwụ. Site na nnukwu mbọ oge niile, anyị nwetara ọnụ ahịa dị elu nke ndị ahịa anyị wee jiri nwayọọ nwayọọ malite aha ọma n'ahịa mba ụwa.
Dabere na mkpa ndị ọrụ si gburugburu ụwa, IVEN na -aga n'ihu na -eme ọtụtụ nyocha miri emi na ọmụmụ banyere mmepe nke ụlọ ọrụ ọgwụ na ụlọ ọgwụ, lebara anya na mmepụta nchekwa ọgwụ na ngwaahịa ọgwụ, na -agbaso nkwalite na -enweghị njedebe nke igwe na ọrụ anyị. mma. Anyị ga -eji ezi obi na -akwado ụlọ ọrụ ọgwụ na ụlọ ọrụ ahụike sitere gburugburu ụwa, na -etokọ ọnụ ma na -emekwa mbọ ike maka ahụike mmadụ.
*Nhazi usoro mmepụta
*Nhazi echiche na nhazi ihe owuwu zuru ezu
Ị nwere nsogbu ndị a?
• Isi ihe dị na atụmatụ ahụ abụghị nke pụtara ìhè, nhazi ya enweghị ezi uche.
• A naghị ahazi imepụta ihe omimi, mmejuputa ya siri ike.
• Ọganiru mmemme a na -achịkwaghị achịkwa, usoro ihe owuwu enweghị njedebe.
• Enweghị ike ịma ịdị mma akụrụngwa ruo mgbe arụghị ọrụ.
• Ọ na -esi ike ịkọ ihe ọ ga -efu ruo mgbe ego funahụrụ ya.
• Na -egbu oge dị ukwuu na ndị na -ebubata ngwaahịa na -eleta, na -ekwupụta atụmatụ imewe na njikwa ihe owuwu, tulee ya otu ugboro ọzọ.
Iven na-enye usoro injinịa agbakwunyere maka ụlọ ọrụ ọgwụ na ụlọ ọgwụ n'ụwa niile gụnyere ụlọ dị ọcha, njikwa akpaaka na sistemụ nlekota, usoro ọgwụgwọ mmiri ọgwụ, ịkwadebe na ịnyefe usoro, ndochi na usoro mbukota, sistemụ lọjistik akpaka, sistemụ njikwa mma na ụlọ nyocha etiti na wdg Dị ka usoro iwu ụlọ ọrụ ọgwụ si achọ mba dị iche iche yana ihe onye ahịa chọrọ, IVEN ji nlezianya hazie azịza injinịa nke ọrụ turnkey ma nyere ndị ahịa anyị aka imeri aha na ọkwa dị elu na akwụkwọ nke ụlọ ọrụ ọgwụ n'ụlọ.
Ike R&D anyị nke igwe na -ere ọgwụ maka ngwaahịa usoro ngwanrọ IV nọ n'ogo zuru oke na ọkwa ụlọ na ọkwa mba ụwa. Ọ tinyela akwụkwọ maka ihe nrịba ama teknụzụ karịrị iri isii, ọ nwere ike ịnye akwụkwọ nkwado zuru oke maka nkwado ngwaahịa ndị ahịa yana asambodo GMP. Companylọ ọrụ anyị erela narị narị soft soft IV line production line ruo na njedebe nke 2014, ọ na -akpata 50% nke oke ahịa; Akara karama IV usoro mmepụta ihe karịrị 70% òkè ahịa na China. A na -eresịkwa Russia, Central Asia na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia karama rọba IV, ọ na -enweta otuto sitere n'aka ndị ahịa niile. Companylọ ọrụ anyị ewulitela mmekọrịta imekọ ihe ọnụ nke ọma na ndị nrụpụta ihe ngwọta 300 IV na China, wee nweta ezigbo aha na Russia, Uzbekistan, Pakistan, Negeria na mba 30 ndị ọzọ. Anyị aghọọla akara ndị China kacha amasị mgbe ndị na -emepụta ihe ngwọta IV zuru ụwa ọnụ na -azụta. Ụlọ ọrụ na -emepụta ọgwụ anyị bụ otu n'ime ndị isi otu China Pharmaceutical Equipment Association, Kọmitii Nkà Mba na Standardization Equipment Pharmaceutical, na onye isi na -emepụta igwe na -emepụta ọgwụ na China. Anyị na -achịkwa ịdị mma nke igwe, dabere na ISO9001: 2008, soro cGMP, European GMP, US FDA GMP na WHO GMP ụkpụrụ wdg.
Anyị ewepụtala usoro ihe eji eme ihe iji mezuo ihe ahaziri iche, dị ka akwa na-abụghị PVC Soft Bag/ PP bottle/ glass bottle IV line production line, ampoule automatic/ vial washing- line production production, oral liquid wash-drying – filling- ahịrị mmepụta akara, ahịrị okirikiri a na-emejupụta akara akara akara, ahịrị nrụpụta sirinji emejuputara akara wdg.
Ngwa Ọgwụgwọ Mmiri：
Ọ bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu ọkachamara na R&D na nrụpụta RO maka mmiri dị ọcha, sistemụ distiller mmiri nwere ọtụtụ ihe maka mmiri maka ịgba ntụtụ, igwe na-eme ka uzuocha dị ọcha, sistemụ nkwadebe ngwọta, ụdị mmiri niile na tankị nchekwa ihe ngwọta, yana sistemụ nkesa. .
Anyị na -enye nrụpụta akụrụngwa dị elu yana nrụpụta dabere na GMP, USP, FDA GMP, EU GMP wdg.
Nkwakọba akpaka na sistemụ ụlọ nkwakọba ihe & akụrụngwa akụrụngwa：
Dịka onye nrụpụta onye nrụpụta maka sistemụ nkwakọba ihe na akpaka nwere ọgụgụ isi, anyị na -elekwasị anya na ngwongwo akpaaka na ụlọ nkwakọba ihe R&D, imebe, imepụta, injinịa na ọzụzụ.
Nye ndị ahịa usoro mwekota niile site na ngwugwu akpaaka gaa injinịa WMS & WCS injin nwere ezigbo ọrụ dị mma, dị ka igwe ngwongwo robotic, igwe na-ekpughe katọn zuru oke, sistemụ lọjistika akpaaka na sistemụ ụlọ nkwakọba ihe atọ.
Site na ọtụtụ azịza dị ọnụ ahịa, a na-eji ọrụ na ngwaahịa anyị n'ọtụtụ ebe na ọgwụ, nri, ụlọ ọrụ elektrọnik na ụlọ ọrụ lọjistik wdg.
Mkpokọta Ọbara Ọkụ Igwe Ọkụ：
Anyị lekwasịrị anya n'ịdị mma dị elu, rụọ ọrụ nke ọma, dị irè ma na -adịgide adịgide akụrụngwa mmepụta tube na akụrụngwa akpaka dị mkpa. Anyị nakweere teknụzụ mmepụta ọkpọkọ ihe mkpocha ọbara kachasị dị elu n'ime afọ iri abụọ gara aga, anyị ewepụtala ọtụtụ ọgbọ nke ahịrị mmepụta mkpụrụ ndụ ihe mkpocha, nke kwalitere ụlọ ọrụ na -emepụta ihe mkpofu ọbara n'ọkwa dị elu gburugburu ụwa.
Anyị na -agbasi mbọ ike n'ịdị mma ngwaahịa na ihe nrụpụta nka, anyị enwetala ihe nrịba ama karịa 20 maka akụrụngwa nrụpụta tube. Anyị na -emezi ọkwa teknụzụ akụrụngwa ka ọ bụrụ onye isi na onye nrụpụta ụlọ ọrụ akụrụngwa na -emepụta mkpokọta ọbara China.
Mmemme mba ofesi
N'ime mba ise dị n'Ebe Etiti Eshia, a na -ebubata ọtụtụ ngwaahịa ọgwụ sitere na mba ọzọ, na -ekwupụtaghị na ntinye ọgwụ. Mgbe ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike, anyị enyerelarị ha aka isi na nsogbu pụta otu otu. Na Kazakhstan, anyị wuru nnukwu ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ nke na-agụnye abụọ Soft Bag IV-Solution Production Lines na anọ Ampoules Injection Production Lines.
Na Uzbekistan, anyị wuru otu ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ Bot Bot IV-Solution, nke nwere ike na-emepụta nde karama iri na asatọ kwa afọ. Ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -ewetara ha nnukwu uru akụ na ụba kamakwa ọ na -enye ndị obodo ahụ ezigbo uru na ọgwụgwọ ọgwụ.
Na Russia, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ọgwụ malitere na mbụ, ma ngwa na teknụzụ ka bụ ihe mgbe ochie. Mgbe ọtụtụ nleta maka ngwa ndị Europe na atụnyere ndị na-ebubata ngwaahịa dị iche iche nke China, onye nrụpụta ọgwụ na-emepụta ọgwụ kacha ukwuu họọrọ anyị ka anyị mee karama PP IV-Solution Project n'ikpeazụ, nke nwere ike mepụta nde 72 karama PP kwa afọ.
Afrịka nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu, ebe ntọala ụlọ ọrụ ọgwụ ka na -adịghị ike, chọrọ nchegbu karịa. Ugbu a, anyị na-ewu ụlọ ọrụ na-emepụta Soft Bag IV-Solution Pharmaceutical Factory na Nigeria, nke nwere ike na-emepụta nde 20 nke akpa nro kwa afọ. Anyị ga-aga n'ihu na-ewu ụlọ nrụpụta ọgwụ dị elu karịa n'Africa, anyị na-achọkwa ka ndị obodo nọ n'Africa nwere ike nweta ezigbo uru site na iji ngwaahịa ọgwụ na-adịghị ize ndụ nke nrụpụta ụlọ.
Maka Middle East, ụlọ ọrụ ọgwụ na -amalite ugbu a, mana ha na -ekwu maka USA FDA nwere echiche kachasị elu na ụkpụrụ kachasị elu iji lekọta ịdị mma ọgwụ ha na ụlọ ọrụ ọgwụ. Otu n'ime ndị ahịa anyị si Saudi Arabia nyere anyị iwu maka imere ha Soft Soft IV-Solution Turnkey Project, nke nwere ike na-emepụta ihe karịrị nde akpa iri abụọ na abụọ kwa afọ.
Na mba ndị ọzọ dị n'Eshia, ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ atọrọla ntọala, mana ọ dịrịghị ha mfe ịrụ ụlọ nrụpụta IV-Solution dị elu. Otu n'ime ndị ahịa Indonesian anyị, mgbe emechara nhọrọ, họpụtara anyị, onye na-ahazi ike zuru oke, iji wuo ụlọ ọrụ ọgwụ ọgwụ IV-Solution dị elu n'obodo ha. Anyị ejirila karama/elekere 8000 gụchaa usoro nke 1 nke ntụgharị turnkey nke na -aga nke ọma. Na usoro nke abụọ ha nwere karama/elekere 12000, anyị ga -amalite nrụnye na ngwụcha 2018.
• Dịka otu ndị ọkachamara nwere ahụmịhe karịa afọ iri na akụ achịkọtara na ụlọ ọrụ ọgwụ, imirikiti ị nweta ngwaahịa dị mma, ọnụahịa asọmpi, ọnụ ahịa dị oke ọnụ na uru.
• Site na sistemụ njikwa ọkachamara na mmesi obi ike dị mma, imepụta na iwu anyị na -agbaso ụkpụrụ FAD, GMP, ISO9001 na 14000, akụrụngwa ahụ na -adịte aka ma nwee ike iji ihe karịrị afọ 15. (Ngwa igwe anaghị agba nchara dị ihe karịrị afọ 20. )
• Ndị otu anyị na -ahazi nke ọtụtụ ndị ọkachamara ọkachamara na ụlọ ọrụ na -ere ọgwụ nwere ikike teknụzụ pụtara ìhè, maara nke ọma n'ịdị omimi, na -ewusi nkọwa ike, na -ekwe nkwa mmejuputa atumatu a nke ọma.
• Site n'iji nlezianya gbakọọ ya, nhazi ezi uche na ịhazi usoro nhazi ego ọnụ ahịa, njikwa oke ma kwalite ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ, si otu a hụ na ụlọ ọrụ nwere ezigbo uru.
• Site na ndị otu ọrụ ọkachamara na -akwado ntanetị na ntanetị n'ọtụtụ asụsụ, dị ka: n'asụsụ Bekee, Russian, Spanish, French, ect, si otú a na -ahụ na ọrụ dị mma yana nke ọma.
• Ihe karịrị ahụmịhe afọ 10 na ọrụ turnkey n'ọhịa ọgwụ nwere ezigbo ọrụ nka nke nrụnye na iwu ụlọ, ọrụ ndị ahụ kwadoro FDA, GMP na European Union na nkwenye ndị ọzọ.
ỌRỤ dị egwu nke ndị otu anyị nyere ndị ahịa anyị!
Ngosi ihe ngosi nke Project
Nkwado nka na ụzụ tupu mre ahịa
1. So na ọrụ nkwadebe nke oru ngo a wee nye ndụmọdụ ntụaka dị nso mgbe onye zụrụ ahịa ga -amalite ime atụmatụ atụmatụ yana ụdị ngwa.
2. Ziga ndị injinia na teknụzụ ndị metụtara ya na ndị na -ere ahịa ka ha jiri ihe teknụzụ nke onye zụrụ wee nwee nkwurịta okwu miri emi wee nye usoro nhọrọ ụdị akụrụngwa mbụ.
3. Nye onye na -azụ ihe usoro nhazi ya, data teknụzụ na nhazi akụrụngwa nke akụrụngwa metụtara ya maka nhazi ụlọ ụlọ mmepụta ihe.
4. Nye ihe atụ injinịa nke ụlọ ọrụ maka ntụnye onye zụrụ ya n'oge nhọrọ na imewe. Na -enye ihe metụtara ya nke ihe atụ injinịa maka mgbanwe teknụzụ.
5. Nyochaa mpaghara mmepụta na usoro nhazi nke ụlọ ọrụ. Nye akwụkwọ metụtara sistemụ njikwa logistic na sistemụ njikwa mma.
II Njikwa oru ọrịre
1. Banyere oru ngo a na nkwekọrịta ọ bịanyere aka na ya, ụlọ ọrụ ahụ na -eme njikwa oru ngo na -ekpuchi usoro niile site na ịbịanye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ruo nlele ikpeazụ na nnabata ọrụ ahụ. Nzọụkwụ ndị bụ isi bụ ndị a: mbinye aka nkwekọrịta, mkpebi atụmatụ eserese ala, imepụta na nhazi, obere mgbakọ na nbipu, nbipu ọgbakọ ikpeazụ, nyocha nnyefe, mbupu akụrụngwa, nbipu ọnụ, nlele na nnabata.
2. Ụlọ ọrụ a ga -ahọpụta injinịa nwere ahụmịhe dị ukwuu na njikwa oru ngo dịka onye na -ahụ maka ọrụ, onye ga -ewere ọrụ zuru oke maka njikwa oru na njikọta. Onye na -azụ ahịa kwesịrị ikwenye ihe nkwakọ ngwaahịa wee hapụ nlele. Onye na -azụ ahịa kwesịkwara inye ihe maka ịnya ụgbọ elu n'oge mgbakọ na ịbubata onye na -ebubata ya n'efu.
3. Enwere ike ịme nlele mbụ na nnabata ngwa ahụ n'ụlọ nrụpụta ihe ma ọ bụ ụlọ nrụpụta. Ọ bụrụ na -eme nlele na nnabata na ụlọ ọrụ na -ebubata ngwaahịa, onye na -azụ ahịa kwesịrị iziga ndị mmadụ na ụlọ ọrụ na -ebubata ngwa ahịa maka nlele na nnabata n'ime ụbọchị ọrụ 7 mgbe ọ natasịrị ọkwa maka nrụpụta akụrụngwa emechara n'aka onye na -ebubata ya. Ọ bụrụ na a na -eme nlele na nnabata na ụlọ ọrụ na -azụ ahịa, ekwesịrị ịkwapụ akụrụngwa ma lelee ya site na onye na -ebubata ya na onye zụrụ ya n'ime ụbọchị ọrụ abụọ mgbe ngwa ahụ rutere. A ga -agwụrịrị akwụkwọ nyocha na nnabata.
4. A na -ekpebi atụmatụ nrụnye akụrụngwa site na nkwekọrịta nke akụkụ abụọ a. Ndị ọrụ nbipu ya ga -eduzi nrụnye dịka nkwekọrịta siri dị ma mee ọzụzụ ubi maka ndị ọrụ na -arụ ọrụ na ndozi.
5. N'ọnọdụ na -enye mmiri, ọkụ eletrik, gas na ihe nbipu, onye zụrụ ahịa nwere ike gwa onye na -ebubata ya ka o ziga ndị ọrụ maka nrụzi akụrụngwa. Onye zụrụ ya ga -akwụ ụgwọ mmiri, ọkụ eletrik, gas na ihe nbipu nsị.
6. A na -eme nchapu ahụ na ụzọ abụọ. A na -arụnye akụrụngwa ma tinye ahịrị n'ahịrị nke mbụ. N'ọkwa nke abụọ, a na -eme nbipu na nnwale ụgbọelu na ọnọdụ nke onye na -eku ume ikuku dị ọcha yana mmiri, ọkụ eletrik, gas na ihe nbipu dị.
7. Banyere nlele ikpeazụ na nnabata, a na -eme nnwale ikpeazụ dịka nkwekọrịta na akwụkwọ ntuziaka akụrụngwa dị n'ihu ndị ọrụ na -ebubata ngwaahịa na onye na -azụ ahịa na -elekọta ya. A na -ejupụta akwụkwọ nlele ikpeazụ na nnabata mgbe ule ikpeazụ mechara.
Akwụkwọ enyere aka nke III nyere
I) Data iru eru nwụnye (IQ)
1. Asambodo ogo, akwụkwọ ntuziaka, ndepụta mbukota
2. Ndepụta mbupu, ndepụta nke itinye akụkụ, ọkwa maka imebi
3. Ihe osise nrụnye (gụnyere eserese akụrụngwa, eserese ebe njikọ njikọ, eserese ebe ọnụ, eserese ọkụ eletrik, eserese draịva, akwụkwọ ntuziaka maka nrụnye na ibuli)
4. Akwụkwọ ntuziaka maka akụkụ ndị a zụrụ azụ
II) data ntozu arụmọrụ (PQ)
1. Akụkọ nyocha ụlọ ọrụ na oke arụmọrụ
2. Akwụkwọ nnabata maka ngwa
3. Asambodo ihe dị mkpa nke igwe isi
4. Ụkpụrụ dị ugbu a nke ụkpụrụ nnabata ngwaahịa nke ngwaahịa
III) data ntozu ọrụ (OQ)
1. Testzọ nnwale maka oke akụrụngwa akụrụngwa yana ndepụta arụmọrụ
2. Usoro ọrụ ọkọlọtọ, usoro ịsachasị ọkọlọtọ
3. Usoro maka mmezi na nrụzi
4. Ụkpụrụ maka arụpụtaghị akụrụngwa
5. Ndekọ ntozu nwụnye
6. Ndekọ ntozu ọrụ
7. Pilot na -agba ndekọ iru eru
IV) Nyocha arụmọrụ akụrụngwa
1. Nkwenye arụ ọrụ nke ọma (lelee ọnụọgụ buru ibu na idoanya)
2. Lelee ịdị mma nke nhazi na nrụpụta
3. Nnwale arụmọrụ maka ndị na -achọ njikwa akpaka
4. Inye ngwọta na -eme ka ngwa ọrụ zuru oke zute nkwenye GMP
Ọrụ IV mgbe irere ahịa
1. Mepụta faịlụ akụrụngwa ndị ahịa, debe ihe ọkọnọ akụrụngwa na -akwụsịghị akwụsị, ma nye ndụmọdụ maka mmelite nka na ntughari teknụzụ.
2. Mepụta usoro na-esochi ya. Gaa leta onye ahịa oge ụfọdụ mgbe nrụnye na nrụzi akụrụngwa arụchaala iji nye ozi azụ n'oge iji hụ na ụda ahụ kwụsiri ike ma bụrụkwa nke a pụrụ ịdabere na ya wee wepụ nchegbu onye ahịa.
3. Mee nzaghachi n'ime awa 2 mgbe ị natasịrị ọkwa ọdịda akụrụngwa akụrụngwa ma ọ bụ ọrụ chọrọ. Hazie ndị ọrụ mmezi ka ha rute saịtị ahụ n'ime awa 24, yana awa 48 n'ikpeazụ.
4. Oge nkwa dị mma: afọ 1 mgbe nnabata ngwa. “Mkpesa atọ” emere n'oge oge njiri mara mma gụnyere: nkwa nrụzi (maka igwe zuru oke), nkwa maka nnọchi (maka iyi akụkụ ma e wezụga mmebi mmadụ mere), na nkwa nkwụghachi (maka akụkụ nhọrọ).
5. Guzobe usoro mkpesa ọrụ. Ọ bụ ebumnuche anyị kachasị ijere ndị ahịa anyị ozi nke ọma ma nabata nlekọta nke ndị ahịa anyị. Anyị kwesịrị ịkwụsị mkpebi siri ike na ihe ndị ọrụ anyị na -achọ ịkwụ ụgwọ n'oge nrụnye akụrụngwa, nbipu na ọrụ nka.
V Usoro ọzụzụ maka ịrụ ọrụ na ndozi
1. Ụkpụrụ izugbe bụ "oke dị elu, ogo dị elu, ngwa ngwa na mbelata ọnụ ahịa". Usoro ọzụzụ kwesịrị ijere mmepụta ahụ.
2. N'ezie: Usoro mmụta na usoro bara uru. Usoro mmụta bụ tumadi maka akụrụngwa na -arụ ọrụ akụrụngwa, nhazi, njirimara arụmọrụ, oke ngwa, akpachapụ anya na -arụ ọrụ, wdg. akụrụngwa na nnọchi na imezi akụkụ akọwapụtara.
3. Ndị nkuzi: Ọdịdị dị mkpa nke ngwaahịa ahụ na ndị ọrụ nka nwere ahụmihe
4. Ndị na -enye ọzụzụ: Ndị ọrụ na -arụ ọrụ, ndị na -ahụ maka ọrụ na ndị ọrụ njikwa metụtara ya site n'aka onye zụrụ ya.
5. Ọnọdụ ọzụzụ: A na -eme mmemme ọzụzụ na saịtị nrụpụta akụrụngwa nke ụlọ ọrụ na nke mbụ, a na -eme mmemme ọzụzụ na saịtị mmepụta nke onye ọrụ maka oge nke abụọ.
6. Oge ọzụzụ: Dabere na ọnọdụ bara uru nke akụrụngwa na ndị nkuzi
7. Ụgwọ ọzụzụ: Inye data ọzụzụ n'efu na ịnabata ndị na -enye ọzụzụ n'efu na ịgaghị akwụ ụgwọ nkuzi.
Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Disposable ntụtụ & agịga Production Line,